Akụkọ - Gịnị kpatara eji efere carbon fiber?
Gini mere eji eji efere carbon fiber?
Ibu dị obere:
Ejiri akwa carbon fiber na resin epoxy mee bọọdụ eriri carbon.Enwere ike ịme ya ka ọ bụrụ mbadamba carbon fiber dị iche iche na nha dị iche iche dịka mkpa ndị ahịa si dị.Dị ka ọ na-adịkarị, ịdị arọ nke osisi carbon fiber na-erughị 1/4 nke ihe nchara, nke na-enye nhọrọ ka mma maka ọtụtụ ndị ahịa na-amasị ntụrụndụ RC.
Ike dị elu na isi ike
The ruru nke carbon eriri ihe ike njupụta nwere ike iru 2000Mpa / (g / cm3), mgbe ígwè ihe nwere ike na-eru 59Mpa / (g / cm3).N'ụzọ dị iche, ngwaahịa dị iche iche nke carbon fiber (bọọdụ fiber carbon, carbon fiber tubes, carbon fiber furniture, drones, carbon fiber musical equipment, etc.) ka ọtụtụ ndị mmadụ hụrụ n'anya.
Nguzogide corrosion & Chemicals
A na-eji akwa carbon fiber mee ngwaahịa fiber carbon na resin epoxy site na oke okpomọkụ na nrụgide dị elu.Epoxy resin adịghị mfe imebi ma ọ bụ nchara.Carbon dị na eriri carbon dị ike nke ukwuu ma na-eguzogide oxidation.Ụfọdụ ndị ahịa na-ahọrọ iji ya na ihe gbasara ụgbọ mmiri.Nke a na-agbasawanye ahịa maka iji eriri carbon.
N'ihi njirimara dị elu nke eriri carbon, otu esi ahọrọ eriri carbon dị elu dị ezigbo mkpa:
1) Carbon fiber mpempe akwụkwọ na-emekarị mejupụtara akwa UD na akwa 3K.Ekwesịrị ime akwa UD ka ọ bụrụ ngwaahịa carbon fiber na-ezute ọkọlọtọ nwere agba ojii na nke dị larịị, ezigbo nguzogide okpomọkụ na nguzogide corrosion.
2) Ndị na-emepụta ihe dị iche iche n'ahịa nwere ike inwe ọrụ nka dị iche iche, ma nwee ike inwe otu akụrụngwa, mana a ga-enwekwa ngwaahịa dị mma.Mgbe ị na-azụrụ ihe, ị ga-ahọrọ bọọdụ fiber carbon dị ọnụ ala, ka e wee nwee ike ikwenye àgwà ngwaahịa ndị ahịa nke ọma.
3) Ụdị ndị a ma ama na ndị otu teknụzụ dị mkpa niile.Fibre carbon nke Feimoshi bụ ngwaahịa na-eri ọnụ nke ejiri akwa carbon na resin ebubata.
4) The mgbe-sales otu na-arụ otu dokwara mkpa ọrụ.Anyị ụlọ ọrụ nwere ọkachamara teknuzu otu na-enye a pụrụ ịdabere na mgbe-ire ahịa nkwa maka ndị ahịa' ngwaahịa.Anyị ga-ebuli nsogbu àgwà ọ bụla.
Oge nzipu: Jul-07-2021